Akụkọ - Ihe dị iche iche nke ihe nkpuchi ahụike, N95 na nkpuchi KN95
Ihe dị iche iche nke ihe mkpuchi ọgwụ, N95 na KN95 masks
N'oge na-adịbeghị anya, anyị niile na-azụta ihe nkpuchi. Anyị anakọtara ụfọdụ ozi ebe a
Ihe di iche na nkpuchi nkpuchi ahu ike, nkpuchi N95 na nkpuchi KN95
1. Medical echebe nkpuchi: na akara na China GB 19083-2010 amanyere bụ iwu ọkọlọtọ, filtration arụmọrụ ≥ 95% (anwale na-abụghị mmanu mmanu ahụ). A choro ya iji gabiga ule nke ihe omimi (gbochie aru aru) ma zuta ihe ngosi nke microbial.
2. N95 nkpuchi: NIOSH asambodo, filtration arụmọrụ nke na-abụghị mmanu mmanu ahụ ≥ 95%.
3. KN95 nkpuchi: izute amanyere bụ iwu nke ọkọlọtọ nke GB 2626, na filtration arụmọrụ nke na-abụghị mmanu mmanu ahụ bụ karịa ma ọ bụ hà 95%.
Dị ka peas abụọ, usoro atọ dị elu nke usoro nyocha arụmọrụ na-adị otu. Ya mere, na filtration arụmọrụ larịị bụ agbanwe agbanwe.
Ya mere, anyị na-azụta NIOSH N95 na GB2626-2006 KN95 masks bụ otu. Isi ihe na-eyi mkpuchi bụ imechi ihu, ya bụ, enweghị ikuku ikuku! Biko jiri nlezianya gụọ ntuziaka ndị ahụ tupu iyi ya.
"Corekpụrụ ndị bụ isi maka ihe nkpuchi ụlọ ọrụ na nke ngwaahịa ngwaahịa bụ otu. KN95 nke GB2626 ọkọlọtọ dị mma, na KN90 ezuola n'eziokwu. Naanị mgbe ndị ọrụ ahụike nwere mmiri mmiri na-agbapụta, yana mgbe mgbako gburugburu ebe obibi dị oke elu, ọ kwesịrị ịdị oke nlezianya. Mana ekwesiri ighota na kpakpando ufodu mara mma nke nwere otu nkpuchi ahu, ma n’agbanyeghi ihe nchebe. Ndi okacha amara nke ato nke 3M gwara ndi oru nta akuko nke 21st 21st.
Banyere ugboro ole a na - agbanwe ihe nkpuchi, ndị ọrụ aka ahụ e kwuru n’elu kwuru na ọ bụrụ na ha ruru unyi ma gbajiri agbaji, ha ga-agbanwe ha n’ime ụbọchị atọ ma ọ bụ ise, maọbụ ọ bụrụ na ndị ọrụ ahụike aga ebe ahụ emetọ, ha ga-agbanwe ha.
N'ezie, enweghị nkwubi okwu doro anya na oge kachasị mma nke ndị mkpuchi N95 na mba ndị ọzọ, gụnyere ndị, na enweghị ụkpụrụ dị mkpa maka oge ojiji nke N95 masks na China. Fọdụ ndị na-eme nchọpụta emeela nchọpụta dị mkpa gbasara arụmọrụ nchedo yana oge mkpuchi N95 mkpuchi mkpuchi ahụ. Nsonaazụ gosiri na mgbe ejiri mkpuchi N95 were ụbọchị abụọ, arụmọrụ nzacha ka na-adị elu karịa 95%, na iku ume iku ume na-agbanwe obere; filtration arụmọrụ ebelata ka 94,7% mgbe yi N95 ọgwụ na-echebe nkpuchi maka 3 ụbọchị.
Agbanyeghị, a ga-edochi ihe mkpuchi ahụ n'oge ma ọ bụrụ na ọnọdụ ndị a:
1. Ikuku ume na-ebuwanye ibu;
2. Ihe nkpuchi mebiri ma ọ bụ mebie;
3. Mgbe nkpuchi enweghị ike ịba ihu ihu nke ọma;
4. Ihe nkpuchi ahụ metụrụ (dị ka ọbara ọbara ma ọ bụ ụmụ irighiri mmiri na ihe ndị ọzọ si mba ọzọ);
5. Ejila ya na ngalaba onye ọ bụla ma ọ bụ kpọtụrụ onye ọrịa (n'ihi na emetọla ihe nkpuchi ahụ);
6. Ọ bụrụ na nkpuchi ahụ nwere carbon na-arụ ọrụ, enwere isi ísì na nkpuchi ahụ.
Tụkwasị na nke ahụ, a ga-akwụ ụgwọ isi ihe ndị a mgbe ị na-etinye ihe mkpuchi
1. Saa aka tupu i tinye ihe nkpuchi ahụ, ma ọ bụ zere imetụ akụkụ nke nkpuchi ahụ n'oge a na-etinye ihe nkpuchi ahụ, iji belata ohere nke mmetọ ahụ.
2. Chọpụta ọdịiche dị n'ime na n'èzí, elu na ala nke nkpuchi ahụ. Akụkụ agba ọkụ dị n'ime ya kwesịrị ịbịaru ọnụ na imi aka, akụkụ gbara ọchịchịrị ga-echekwa ihu; na ngwụcha nke ígwè ahụ bụ elu nkpuchi.
3. Etinyela aka gị na nkpuchi gị, gụnyere nkpuchi N95. I nwere ike na-anọrọ nje n'elu nkpuchi. Ọ bụrụ na ị jiri aka gị pịkọta ihe mkpuchi ahụ, nje ahụ ga-eji mmiri na-agba mmiri, nje nwere ike ibute nje ahụ.
4.Jide n'aka na ihe nkpuchi ahụ dabara nke ọma na ihu. Testzọ nnwale dị mfe bụ: mgbe i yichara ihe nkpuchi ahụ, kpụpụta ike, ikuku enweghị ike ịpụ site na nsọtụ nkpuchi ahụ.
Mgbe ịzụrụ ihe nkpuchi, ị nwere ike ibu ụzọ lelee akara ngosi nke ngwugwu dị na mpụga. Igodo ikpeazụ nke iji mkpuchi mkpuchi dị ezigbo mkpa. Ọ bụghị naanị na-acha ọcha ma na-acha ọcha!